Hal Sano ka hor: Gawracii Xisbiga UCID + Garnaqsiga Jamal Cali Xuseen Ee Maanta - somalilandlivemedia
Hal Sano ka hor: Gawracii Xisbiga UCID + Garnaqsiga Jamal Cali Xuseen Ee Maanta
11:57 12. November 2017
Hargeysa()-Taarikhdu waa raad nolohu ku suntado meertada dunida korkeeda intaa uu ku sugan yahay waayaha kolba lasoo dersa, sida colaad, nabad, farxad, naxdin, barqaawo iyo basanbaas, kii ay doonto ha noqotee. Waxa kaloo taarikhdu tahay cashar nolosha wax-ka-bara Jiilasha danbe, kol waxay noqotaa ileys mugdiga lagaga baxo, kolna waxay noqotaa mugdi aragtida lumiya.
Kol kale, Taarikhdu waxay tahay hillinka loo maro horuumar leh nolol-sami, marna waxay noqotaa qalin lagula dagaalamo dacaad-laawayaasha iyo dulmiga, had kalena waxay tahay diffaaca dulmanaha iyo dan-yarta. Geesinimadu maaha qori, Raganimaduna maaha aftahannimo, balse gobanimadu waxay tahay inaad ka garrowdo khalad, sida Marxuum Maxamed Xaashi Dhamac “Gaariye” inoogu dhigay Tix kamid ah Maansooyinkiisa.
Sidaa darteed Akhristee, Maanta oo Taarikhdu tahay 8-dii, Novomber, 2017-ka, waxa hal-sanno oo buure ah laga joogaa dharaartii Gudoomiyaha Maxkamada sare Aadan X. Cali u xukun qar-qooshka kasoo saaray Kiiskii Khilaafka Xisbiga UCID, oo ay laba daraf ka ahaayeen Musharrax Jamaal Cali Xuseen iyo Gudoomiye Faysal Cali Waraabe. Waa dharaar xasuus u leh Musharrax Jamaal Cali Xuseen iyo saaxiibadiisii sannaad ka hor, waa dharaar wax-saar u leh Gudoomiyaha Maxkamada sare ee Somaliland Aadan Xaaji Cali oo taarikhdiisa gashay, waa dharaar Aroos-buu moodayee Aas u dhacay Faysal Cali Waraabe, olologtuna Aaxankiisa ahayd.
Haddaba, hal-sano kadib maanta, waa sidee darreenka Jamaal Cali Xuseen? Waa kan isagoo xasuusta maalintaa ka darreen celinaya;
“..Maanta oo kale, 8-dii November, 2016-ka, waxay ku beegan tahay maalintii cadaaladdii iyo garsoorkii dalku ay god madow gashay. Waa maalintii Maxakamaddii Sare dalku ay qaaday eexdii qarniga, Waa maalintii Gudida Diiwaan gelinta asxaabta qaranku ay shir ay laba cisho ka hor ay xaaraantimeysay ay haddana la soo fadhiisatay waa shir Xalaal ah ee ay xabadda madaxa nagaga dhufatay, Waa maalintii burburka xisbigga Qaran Ee UCID lagu wada heshiiyey Ee Baarlamaan, Guurti, Xisbiyadda kale mucaarid iyo muxaafid, oday dhaqameedyo, culimadda dalka dhamaantood, Madaxtooyada, iyo shacabka Somaliland aanay cidina u tafo xaydan badbaadinta sidii loo badbaadin lahaa.
Waa maalintii Ninka Tv-yadda horteeda iyo shacabka Somaliland horteeda balanta ku galay Ee Faysal Cali Waraabe Oo dhowr jeeroo hore dhacay, lana wada ogaa inaanu xisbigga soo saarin uu ku murmay Ee uu beenbeenta dad intuu Suuqa ka soo urursaday isku caleemo saaray Ee weliba ciidamadda qaranku ay ku ilaalinayeen, waa maalintii hotel Maansoor naloo diiday ee aanu hortiisa ku qabsanay shirkayagii geed hoostii, waa maalintii Somalilandtii aabahay iyo raggii kale xoreeyeen ay xaqa u hiilin weyday Ee hortooda laygu dulmiyey, waa maalintii Somalilandta aan shaqadaydii iyo noloshaydii uga imi ay dhabarka ii jeedisay ee xataa halgamayaashii, Culimaddii aan ka waayey qof qudha Oo yidhaa sax maaha, waa maalinta aan xasuusto raggii iyo dumarkii maalintaa I barbar taagnaa Ee I taageersanaa ileyn hadalka fiicana…waa sade, waa maalintii sharci burburinta dalka Somaliland ku suntan Ee nin aan murashax xataa noqon Karin saddex jeer khasab loogaga dhigay murashax ileyn wuu dhacayaaye, waa maalin ay ii qoolan yihiin dhamaan gudiddii Maxkamadda sare iyo gudoomiyahooda, iyo dhamaan gudiddii asxaabta Qaranka iyo gudoomiyahooda Oo kuligood daalimiin ku qoran, iyo dhamaan intii si toos ah iyo si dadban uga shaqaynaysay burburkayagii xisbiggii tacabka, iyo tamartu naga gashay Ee aanu la soo baxnay. Nin qudha Oo saamaxaad I weydiistay kuma jiro, aniguna qof aan saamaxad I weydiisan Oo I dulmiyey iskama saamaxo Ee Ilaahay baan ku xawilaa.
Waxaasoo dhibaato ahi iyadoo nasoo gaadhay baanu haddana danta ummaddan curdinka ku deynay. Su’aasha aan is weydiiyey baa ahayd horta Ma dan baa adiga kuugu jirtay, markay noqotay jawaabtu maya ayaan idhi cida wax ku weyday way soo bixiye dadkaaga dhinac ka raac Ilaahay baa jooggee. Maan jecleyn inaan ka hadlo taarikhda maanta ku beegan ayaan ka adkaysan waayey. Waxaanan mahad balaadhan u soo jeedinayaa dadkii af, adin iyo uurba naga taageeray. Ninka soo socdaa Ee dalkan xukumi doono waa inuu cadaaladda iyo garsoorka dalkee dhintay uu hagaajiyo dad Ilaahay ka baqanayana uu keeno; haddii kale waa halkii Laanjeere dad cadaalad kala waayey sidii cawsha kala yaac. Somaliland tan ka roon Baan Ilaahay ka baryey Nina Inankiisa lama doonayo wixii aniga Igu dhacay inuu ku dhaco. Adduunka kamay dhicin murashaxnimo la dhaco Oo weliba indho adkaan Igu doorta la yidhaa Oo weliba Ummaddii ay qaarkood sacab Ugu tumayaan halkay tamaandho ku shiidi lahaayeen. Burus qayl biyaha ceel Ma sido, mana baqool daayo.
Horaadkan godol lahaa
Haday iga gaagaxsheen
Gobey liicoo ha jabin
Kheyr Baan idiin rajaynayaa imikana codkiina dhiibta dhalinyarooy. Dulmiga ummadaha waa lagu rogaaye Ilaahayow naga badbaadi..”.
Siyaasi Ismaaciil Geele cadar kana mida siyaasiyiinta ree Awdal ayaa xukuumada soomaliland ku Hambalyeeyay Magacaabista degmada Cusub ee Xeego
Axkaamta Soonka Casharkii 12Aad Video
War Hadda Soo Dhacay :- Musharax Cirro Oo Xilka Gudddoomiyaha Golaha Wakiilada Iska Casilaya Maalinta Beri Ah Video
Newer Post“..Innaga oo Safka ku Wada Jirna, Waa inaynu Gacan Bir ah ku Qabano wixii Doorashada Wax-yeelaya..”Sheekh Aadan-Siiro
Older Post War Deg Deg Ah:-Maleeshiyo Hubaysan Oo Uu Hoggaaminayo Qaswade Ina Aw Siciid Oo Jidgooyo U Galay Suxufiin Ka Yimi Xaflad Uu Xisbiga WADDANI Boorama Ku Qabsadey + Khasaaraha